१ महिनामै २ पटक सुत्केरी, युवतीले जन्माइन् ३ बच्चा ! - NA MediaNA Media१ महिनामै २ पटक सुत्केरी, युवतीले जन्माइन् ३ बच्चा ! - NA Media
कहिलेकाहीँ दुनियाँमा यस्ता घटना हुन्छन्, जसले विज्ञान तथा प्रकृतिलाई नै चुनौती दिने गर्दछ । बंगलादेशमा हालै यस्तै भएको छ, जसका कारण चिकित्सा जगत र आम मानिससमेत अचम्ममा परेका छन् ।एकजना बंगलादेशी युवतीले एक महिनाको बीचमा २ पटक सुत्केरी भएर ३ वटा बच्चा जन्माएकी छन् । पहिलो बच्चा जन्माएको २६ दिनपछि ती युवतीले फेरि जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी हुन् । ती महिला एक महिनाभित्रैमा तीन पटक आमा बनेकी छन् । कुनै पनि महिलाले एक महिनाभित्रैमा दुई पटक सुत्केरी भएर तीनवटा बच्चा जन्माएको घटना विश्वमै पहिलो पटक भएको बताइएको छ ।